Amin'ny Fomban-drazana shinoa: Fivoriana ny olon-tiany ny fianakaviana
Amin’ny Fomban-drazana shinoa: Fivoriana ny olon-tiany ny fianakaviana
Toy ny mpila ravinahitra monina ao Shina, dia mahazo lehibe levitra kolontsaina taitra avy ny fotoana ny fotoana. Fiatrehana ny dehibe sy ny ratsy ny ity firenena mahafinaritra ity, dia matetika aho no mahita ny tenako ao afovoany ny toe-javatra izay tsy afaka ny hahatakatra tanteraka aho mandra-mitsoraka lalina ao aminy. Tamin’ny fotoana sasany nandritra aho, dia nifanena tamin’ny zazavavy mahagaga fa avy hatrany aho dia raiki-pitia. Tantara tsy tambo ho isaina no nitranga eo amin’ny ezaka mba hahatakatra ny tsirairay amin ny fiteny izay Izay nivoaka avy tao am-bavako toy ny muted»azo antoka, dia tsy maninona.»ary hafahafa sambatra ny tavany. Dia tsy faly amin’ny rehetra. Natahotra aho, angamba. Tsy azo antoka ny fomba hamaritana ny handray ny rantsan-tànany, na ny numbing fahatsapana ao ny vozony, na ny lolo ao amin’ny vavony. Ny ratsy karazana lolo.
Araka ny reniko aho aho tena be herim-po ny olona. Tsy maintsy ho marina, satria izy milaza izany. Tsara ihany koa izy hoe tsy tokony handray ny loha rehefa ianao misotro sôkôla mafana satria tsy manary ny. Na izany na tsy izany. Tsy maintsy manaporofo indray fa izy no marina, noho izany dia mazava ho nandray ny sisa dehilahy hormonina ary nampiasa azy ireo mba hisoratra anarana ny tenako ho toy ny lava dia fihaonana ny sipa ny fianakaviany nandritra ny Fetin’ny Lohataona. Noho izany, misy aho. Fonosana ny kitapo ka nanontany ny tenako aho, raha izany dia tena vendrana hevitra eto an-tany, na raha tsy izany dia lehibe herinandro hiala ny tanàna rehetra ny fandotoana sy ny adin-tsaina. Nipetraka tao anaty fiara fitateram-bahoaka nandritra ny ora maro fa tsy izay ratsy. Mihazona ny tatavia ho ora iray dia, na izany aza. Tsy afaka nanakana ny fiara fitateram-bahoaka ao afovoany ny lalambe. Izany tsy ara-dalàna. Tsy afaka mandeha any amin’ny trano fidiovana, satria tsy misy iray. Ny ora lamasinina handeha, dia ny ora ny fiara fitateram-bahoaka, dia iray minitra ny tongotra ny akaiky indrindra fiara foiben’ny noho izany dia afaka mahazo ny sipa ny tanàna iray any moyen-na aiza na aiza. Ny sary ao an-tanàna dia toa tsy misy farany. Toy ny fiara fitateram-bahoaka tsikelikely ny tany any ivelany Shanghai, ny avaratra renirano nanjary hita ary be dia be ny kely ireo fiampitàna mihantona sy tetezana vita ny diany tena mahaliana. Tsy dia be mitranga, izany dia noho ny hatsiaka ny mari-pana sy ny loto mavesatra izay voakasiky ny faritany mandritra izany herinandro izany. Nandritra ireo fiara fitateram-bahoaka mitaingina, raha tsorina dia mipetraka mafy sy ho tony. Tamin’izany fotoana izany aho dia mahatsapa fa mitondra ny iPad dia ny zavatra tsara indrindra ao amin’ny tontolo izao. Namaky be, nilalao vitsivitsy lalao sy nanao zavatra vitsivitsy. Tao amin’ny faritra manodidina ny tanàna, ny tontolo ambanivohitra distrika Tingyu, lainga amin’ny tanàna kely iray ihany fiara fitateram-bahoaka andalana, ary ny momba ny zato ny fianakaviana. Taorian’ny voalohany ny fitaovana sy ny fampidiran-dresaka, dia avy hatrany dia nahazo asaina mipetraka indray ary hankafy ny tonga soa sakafo. Miaiky aho ity: tanteraka aho ok amin’ny sakafo Shinoa. Niezaka aho ny taonina ny zavatra samy hafa, ary fantatro izay hitranga. Izany no tena mahafinaritra. Ny sakafo dia zava-dehibe amin’ny kolontsaina Sinoa. Ny ankamaroan ny multi-million efaha amin’ny isam-mitranga isanandro ao Shina, tena mety hitranga nandritra ny raharaham-barotra sakafo. Toy izany fashion, nandritra ny Lohataona Fety, isan’andro ny sakafo dia toy ny fahafahana hahatratra ny havana, hahalala vaovao zanaky ny lalàna sy ny hankalaza ny taona iray hafa ny harena, ny fahombiazana, ary ny harena. Sliding kely amin’ny sakafo lohahevitra: ny fomba mahaliana ny ampahany kely ny nahandro Shinoa ataovy mora ho vondrona lehibe ny olona hizara. Ny chopsticks mitandrina ny sakafo ao manaikitra mitovy habe anjara, miampy ny mamela izany ho tony raha mandeha avy ny lovia mafana ny vavany. Amin’ny ankapobeny, tena mahafinaritra fomba ny mampifandray azy amin’ny sakafo, tsy misy ny artificiality ny volafotsy cutlery. nandritra ny sakafo, indrindra fa satria ny manodidina ABV, ary mahatonga ahy ny mandeha avy amin’ny aotra ny mahery fo any minitra. Ny olon-tiany ny ray aman-takarina sy ireo efa voaomana ho fisehoan-javatra izany. Izy ireo koa dia naheno tantara maro momba ireo vahiny disliking ny hery ny zava-pisotro mahamamo, ka vonona manodidina kapoaka ity matsiro labiera. Ny sakafo ao amin’ny lamaody ity zava-nitranga hatrany hatrany mandritra ny andro. Tsy nijanona ny orana, ny sakafo sy ny toaka ao amin’ny latabatra. Izany tena mahazatra ny olona any koa ny setroka mandritra ny sakafo, ka tsy shocker rehefa nanatitra ahy ny sigara. Ny ankamaroan’ireo ny lohahevitra noresahina nandritra ny sakafo dia momba ny orinasa vaovao teo akaiky teo, ny governemanta, ny ankizy ao amin’ny fianakaviana, ny olona mahazo manambady, havana amin’ny fahoriana izy, ny mpanankarena, mahantra ny olona, ny sakafo, sns. Nahay be ny fifanakalozan-kevitra ara-dalàna izay mety hitranga na aiza na aiza. mamo dadatoa, clumsily bouncing eo amin’ny rindrina, miezaka ny hivoaka ny trano sy tolokon’olona maro amin’ny olona manodidina azy. Izany no tena fahita any amin’ny Ekoatera, ka nieritreritra aho, toaka no manolotra ahy ho toy izany koa ny fomba fijery eto. Izaho dia mandray ho an’ny hangovers. Izany raha ny marina compacted mifangaro ny Vitaminina B, ny sasany Aty mampitombo ny anana sy ny sakamalaho. Izany miasa, heveriko. Ankoatra ny sakafo rehetra ny traikefa, ny hanasongadinana ny diany dia tena ny fianakaviana fanangonana sy ny fiadanana izay nitondra ny diany. Alohan’ny andro izany, ny hany fantatro ireo tantara rehetra ireo mpandray anjara amin’ny sipako ny fiainana. Fivoriana azy tany ny olona nanampy ahy hahatakatra be dia be ny zavatra momba ny fiainana. Izy dia avy amin’ny tena manetry tena fianakaviana, ny fanoloran-tena mitombo kely ny voly any an-tsaha, mivory milina ho an’ny toeram-pambolena ny fiara sy ny famoronana piesy ho fitaovana mavesatra. Rehefa avy nianatra momba ny Siansan’ny tontolo Iainana ao amin’ny tanàna akaiky, dia nifindra tany ny adala metropolis Shanghai. Indray mandeha izy dia nifanena tamin ny an-tanàn-dehibe izao tontolo izao izy, dia raiki-pitia ny fitambaran’ny toetra sy ny olona nanao trano izy ary lasa ny mpamorona fa izy ankehitriny. Angamba, satria ny ankizy ihany no manana ny aina avy ny asa sy hanokana fotoana ny fianakaviana. Izany saddening fanatanterahana ny fomba toy izany amin’ny fiainako manokana, mihevitra aho fa velona ny fotoana faritra lavitra ny ray aman-dreniko. Taorian’ny voalohany fampidiran-dresaka sy ny fanazavana fohy momba ny zavatra ataoko, nahatsapa aho dia lasa tsy hita maso azy ireo aho, ary lasa iray amin’ny kokoa ny olona iray mipetraka eo amin’ny latabatra ny fianakaviana. Raha ny, ny ankamaroan ireo olona ireo aho, dia fivoriana tsy tena miteny mandarin, fa ny eo an-toerana ny tenim-paritra izay samy hafa be dia be. Dia raha te ho mahay tsara, dia tsy maintsy nanampy ahy fa be.
Tamin’izay fotoana izay, tsapako aho raha tsorina dia niditra ny fanambadiana sambo raha vao dingana mankany amin ny ray aman-dreny ao amin’ny lalàna ny tanàna niaviany. Izaho dia dingana ao an-tanàna. Dia nanao dingana an-tokontany. Nandeha tao an-tranony. Aho, nihinana ny sakafo. Aho nangalatra ny labozia izay isaka mahatahotra. Ny iray amin’ireo lehibe indrindra ny fifanoherana eo Shanghai, ary ny olon-tiany ny tanàna niaviany dia ny tontolo iainana. Ny kalitaon’ny rivotra izany dia fantatra fa iray amin’ireo madio indrindra ao amin’ny faritra, ary na nisy ratsy ny rahon ny fahalotoana izay tonga avy any avaratra andrefana ao ny andro teo aloha, ny alina dia nanolotra ahy ny fomba fijery ny kintana fa efa tsy hita nandritra ny taona maro. Sinoa namorona ny vanja, ka raiso ny avonavona izany ary manisy tahamaina azy amin’ny tavanao (sofiny.) amin’ny alalan’ny firecrackers sy ny afomanga. Raha vao ny tany ao Shina ho ny voalohany, dia ho voaaro amin’ny alalan’ny tsy hita maso ampinga. Tsy afaka mamaky ianao, dia tsy afaka ny hahatakatra. Tsy afaka hihaino, ianao tsy afaka an-trano Indray, dia ny mifanohitra amin’izany no mitranga. Sahirana loatra ianao fanodinana ny tsy misy farany ny vaovao ho faly amin’ny fahamarinana amin’ny alalan’ny onjam-peo, fahitalavitra, takela-by, signage, resaka, sy ny sisa. Ny sakana apetraky ny teny ao Shina dia mamela anao mba handany fotoana bebe kokoa miaraka amin’ny fanakianana tena. Ny ankamaroan’ny olona handeha amin ny alalan dingana ity amin’ny taona voalohany, sy ny vokany matetika levona rehefa afaka izany ny fotoana. Na dia tsy tena hianatra ny teny Sinoa, dia tena mety ny mamantatra ny fototry ny azy, ary tampoka ny fiarovana dia lasa. Fantatrao raha ny raharaha, izany diany nampahatsiahy ahy fa toy izany koa ny fahatsapana. Tampoka, na inona na inona nitsoka toy ny mandarin. Ny tenim-paritra tao an-toerana nanao izany tsy ho ahy aza ny kely vakio ny zava-mitranga. Dia niankina betsaka tamin’ny sipako mba hifandraisana, fa tsy hitondra na inona na inona olana ny isan’andro ny fifandraisana amin’ny fianakaviany. Ny vidin’ny zavatra eto dia manan-mora kokoa noho izay azoko sary an-tsaina. Ho avy eto ary mividy ny zavatra tsy ilaina ho an’ny andro, ho latsaky ny DOLARA amerikana, dia misy fiantraikany lehibe. Izany dia nampahatsiahy ahy ny andro fahiny ny tsara ao Ekoatera, rehefa sakafo dia mora sy azo antoka. Eo amin’ny lalana indray, dia naka ny hafa an-dalana, miaraka amin’ny tena lalana. Izy troll ahy rehefa nanao ahy ny namaky ny tany ngazana. Andro rehefa tonga izahay. Aho tsy ela kokoa ny vaovao. Tsapako be kokoa mifandray amin’ny zava-nitranga, izaho dia velona. Nahafinaritra ahy ny mandeha, ny an-dalambe, ny hamandoana ao amin’ny toeram-pivarotana sy ny toerana izay mampiasa rano ny zavona ny nafanaina ny rivotra sy ny moisturize ny hoditra, dia nahafinaritra ny voasary, ny vovo-dronono eo ny improvised coffee mug, ny fiadanana avy ny maraina tany am-boalohany, raha ny hafa rehetra toa matory, ny ody ankasitrahana ny madio, ny trano vaovao, ao kosa ny taloha bobongolo hanitry ny fahiny-toerana. Aho no malahelo ny namany. Izaho dia malahelo Shanghai kely. Nalahelo ny ny trano, ary ny saka. Hitako kely saka ao an-dakozia, ary nandeha tany amin’ny fuji miezaka ny hahazo ny tifitra avy aminy. Izy nandositra, fa mbola niezaka ny hahazo ny hisambotra ny fotoana. Hiverina any Shanghai, aho matetika sahirana loatra miezaka ny hamaha ny zava-drehetra ary tsy manadino ny fomba tsara tarehy ny toerana mety ho. Raha esory teo daholo ny neon jiro, ny lanitra scrapers, raitra fiara sy môtô, ny fikambanana, ny toeram-pivarotana, ny toeram-pivarotana lehibe sy ny finday, tsy hiafara amin’ny tena voajanahary ary marina ny dikan-excites ahy indrindra: ny Zava-misy. Tanàna lehibe feno hosoka ny olona sy ny trano. Arakaraka ny hampiseho, arakaraka ny fahitana ny harena. Arakaraka ny resaka, arakaraka ny assertive ianao nalaina. Ilay avo indrindra ao an-trano, ny ambony ny lasa hofan-trano (na dia eo aza ny zava-misy dia tsy afaka ny hahita tay amin’ny voaloto ny andro). Handray ny rehetra izay lavitra, ary ianao raha tsorina dia eo afovoan’ny toerana kely, feno olona izay miaina ny day-to-day manao tena nanetry tena, ny olombelona ny zava-drehetra. Tonga ny fotoana izay no nahatsapako fa, na inona na inona ianao no mamaky ny teo aloha, ny Fetin’ny Lohataona nandritra ny Taom-Baovao Sinoa izaho miaiky izaho efa lehibe levitra faharetana sy booze ao ny rafitra, ary izay nanampy ahy hahazo ny alalan ny herinandro, fa raha milalao ny karatra marina, dia azo antoka fa afaka ny ho tonga avy nandresy, ho deraina sy namihina amin’ny olona tsirairay ao amin’ny fianakaviana. Ho an’ny ankamaroan’ny ray aman-dreny eto amin’izao tontolo izao, ny fahatongavan-tsaina ny ankizy tsy mitsaha-mitombo ny dia, hoe, rehefa very ny nify, na koa rehefa ny zanakavavy mitomany ny zazalahy, na rehefa ny ankizy handeha any an-tsekoly, na ny oniversite. Ho an’ny ray aman-dreny Shinoa, ity fotoana ity matetika dia tonga tara, raha ny zanany vavy mitondra ny sipa, na rehefa ny lahy hitondra ny vehivavy sakaizany. Izany no famantarana ho azy ireo.
Ny jiro maitso
Izany dia rehefa aoka handeha ny vavy ny sandriny, ary rehefa nahita azy niampita ny arabe, mifampitantana amin’ny olona iray hafa
Top Fomba nandefa hafatra ny Sinoa Vavy →